Cloudcountry Getaway - I-Airbnb
Ikhabethe lemibhede engu-5 yokugezela engu-2- Indawo yokulala eyi-15!
Ikhaya lakho kude nasekhaya emphakathini othule we-Cloudcountry North. Leli khaya eliyingqayizivele linamakamelo okulala ama-4 igumbi lelanga elinombhede namabhavu amabili agcwele
Kusukela lapho ufika uzothanda indawo enokuthula emagqumeni ambozwe uphayini. Ikhaya linokukhanya kwemvelo okuningi, nakho konke ukubonakala okuseningizimu kwekhaya okuvulekele amafasitela, kubekwe endaweni yokufudumala ikhaya ngokwemvelo ebusika nokubuka ihlathi nezilwane zasendle, lawa mawindi aletha ingaphandle ngempela.
I-Cloud Country Getaway yakho, inesitofu esikhulu sokhuni, ithelevishini ye-LED engu-50 inch flat kanye ne-inthanethi yejubane eliphezulu. Ikhabhinethi yethu inomklamo oyingqayizivele ovumela ukushisa kwelanga nokushisa okuvela esitofini sokhuni kuzungeze ngokwemvelo indaba engaphezulu futhi igumbi ngalinye linefenisha yosilingi engamayintshi angu-60 ukuze kushise ikhaya ngokwemvelo nangokonga. Siphinde sibe nesithando somlilo esiphoqelelwe kanye nokushisa okulinganiselwe emakamelweni okulala. Ikhabhinethi inemibhede emithathu elingana nenkosi ethokomele. Umbhede wegumbi lokulala elikhulu unombhede wegwebu lenkumbulo ye-Tempurpedic, amagumbi okulala amabili aphezulu anombhede osayizi we-Sealy Posturepedic King kanti elinye igumbi linombhede wokunethezeka othi Khetha okuvumela ukuthi ukhethe izinga lokuqina.
Kukhona umbhede wamawele kwelinye lamakamelo okulala angaphezulu kanye nombhede we-futon kwelinye. Lokhu kuvumela imibhangqwana eminingi noma imindeni enwetshiwe ukuthi iqashe ikhabethe futhi izingane zihlanganyele ikamelo nabazali bazo. Lona futhi umbhede omuhle olingana nendlovukazi ngaphansi kwefasitela egumbini elangeni. Ungalala embhedeni futhi ubuke izinkanyezi ebusuku noma iqhwa liwa ebusika! Sekukonke sinemibhede yenkosi emi-3, indlovukazi emi-2, amafuton amabili ezingane, umbhede owodwa kanye namasofa ama-2.
Ikhishi lihlome ngokugcwele isiqandisi esikhulu, umshini wokuwasha izitsha, ukulahla, i-toaster, umenzi wekhofi kanye nobubanzi nohhavini. Kukhona iqoqo eliphelele lezitsha ezingu-12, amabhodwe namapani kanye nezitsha zasekhishini. Kukhona ne-propane grill.
Kukhona iwasha enosayizi ogcwele kanye nesomisi.
Ikhabhinethi inerempu yesitulo esinamasondo, kanti igumbi lokulala elikhulu nebhavu laphansi elikhulu kufinyeleleka kulo abakhubazekile.
Ikhabhinethi yethu ingamakhilomitha angu-6 ukusuka e-Ski Cloudcroft, amamayela angu-10 ukusuka e-Cloudcroft Ice Rink.
Ikhabethe lethu lingalala izivakashi ezingafinyelela kwezingu-15, kodwa sicela usishayele ngamaqembu angaphezu kuka-8, ukuze sikwazi ukwenza indawo yokuhlala efanele.
Sicela ukhumbule ukuthi ikhabethe lethu lihlukaniswe iziqephu nabanye abanikazi bezakhiwo abakhele amakhaya abo lapha ukuze bajabulele ukuthula noxolo olulethwa le ndawo. Noma yimiphi imisindo enomsindo namaphathi uma sekuhwalele ngeke babekezelelwe omakhelwane bethu. Siyabonga ngokuhlonipha indawo enokuthula esifisa ukwabelana ngayo nawe kanye nomakhelwane bethu. Sicela uqaphele ukuthi nakuba ikhabethe lethu lifinyelelwa ngesango elikhulu le-Cloud Country Estates, ikhabethe lethu empeleni litholakala e-Cloud Country North. Ichibi lokudoba, i-swimming pool kanye nezinkundla zethenisi konke kungaphansi kwe-CLOUD COUNTRY CLUB, iklabhu yangasese, yamalungu kuphela futhi izivakashi zethu azivunyelwe ukusebenzisa lezo zinsiza. Idolobhana lase-Cloudcroft linezinkundla zethenisi ezinhle futhi ukudoba kuyatholakala eSilver Lake, cishe amakhilomitha angu-15 ku-Highway 244, umgwaqo oholela eRuidoso. Leli chibi eligcwele kahle elinezinsiza ezinhle.
4.81 · 102 okushiwo abanye
Ikhabethe lethu lisendaweni evikelekile kakhulu, esezingeni eliphezulu.
Sicela ukhumbule ukuthi ikhabethe lethu lihlukaniswe iziqephu nabanye abanikazi bezakhiwo abakhe amagumbi abo lapha ukuze bajabulele ukuthula noxolo olulethwa le ndawo. Noma yimiphi imisindo enomsindo namaphathi uma sekuhwalele ngeke babekezelelwe omakhelwane bethu. Siyabonga ngokuhlonipha indawo enokuthula esifisa ukwabelana ngayo nawe kanye nomakhelwane bethu. Sicela uqaphele ukuthi nakuba ikhabethe lethu lifinyelelwa ngesango elikhulu le-Cloud Country Estates, ikhaya lethu empeleni litholakala e-Cloud Country North. Ichibi lokudoba, i-swimming pool kanye nezinkundla zethenisi konke kungaphansi kwe-CLOUD COUNTRY CLUB, iklabhu yangasese, yamalungu kuphela futhi izivakashi zethu azivunyelwe ukusebenzisa lezo zinsiza. Idolobhana lase-Cloudcroft linezinkundla zethenisi ezinhle futhi ukudoba kuyatholakala eSilver Lake, cishe amakhilomitha angu-15 ku-Highway 244, umgwaqo oholela eRuidoso. Leli chibi eligcwele kahle elinezinsiza ezinhle.
sihlala ngaphandle kwezakhiwo, umphathi wethu wendawo uhlala eduze futhi uyatholakala ukuze uthole usizo. Ikhaya lethu linebhokisi lokukhiya, ngakho-ke sikunikeza ikhodi ngosuku lokungena, ukuzingena ngokwakho.